Baalkaniska oo noqday mid kamid ah wadooyinka tahriibleyda ay u marto Yurub – SBC
Baalkaniska oo noqday mid kamid ah wadooyinka tahriibleyda ay u marto Yurub
London:-Machadka mareykanka Stratford ee daraasaatka sirdoonka ayaa sheegay in qabashada muwaadiniin Libyan ah iyo afar Afghanistaniyiin ah xadka ay wadaagaan Serbia iyo Croatia ay muujinayso jiritaanka wado cusub oo tahriibleyda ay u maraan dhanka dalalka midowga Yurub iyagoo maraya Baalkaniska.
Sidoo kale machadka ayaa tilmamay in joogitaanka dad u dhashay dalka Libya ay suurtagal kadhigayso in madaxweynaha Libya Mucamar Al-qadaafi uu ergo u diray Serbia iyo Croatia si qalab melateri ama calooshood u shaqeystayaal loo keeno dalka Libya.
Dhacdadaan ayaa tilmaamaysa in ay jirto wado cusub oo aan sharci ahayn oo looga gudbayo dalalka Albania iyo Kosovo dhanka Yurub iyadoo la sii marayo dalalka Hungary, Croatia iyo Slovenia.
Wadadaan cusub ayaa culeys hor leh ku noqon doonto midowga Yurub ee dagaalka kula jira qulqulka muhaajiriinta sida sharci darada ah ku soo galaya dalalka xubnaha ka ah midowga yurub.
Wakaalada yurub ee u xilsaaran ilaalinta xaduudaha ee lagu magcaabo (Frontex) ayaa sheegtay in muwaadiniin Turkish ah ay ka caawiyaan maalin kasta in ay xuduudaha ka soo gudabaan 100 qof oo muhaajiriin sharci dara ah.
Tirada muhaajiriinta ee ka soo gudbay xeebaha jasiirada Lambaduza ee koonfurta talyaaniga ayaa gaartay laba iyo toban kun iyo shan boqol tan iyo dabayaaqadii bishii maarso ee la soo dhaafay.
Muhaajiriinta badankood ayaa la sheegay in ay ka soo carareen dalalka Tunisia iyo Libya halkaasi oo ay kadhaceen kacdoono looga soo horjeedo maamuladii ka arrimin jirey dalalkaas.
SBC International Monitorin